ခင်သြ| August 30, 2012 | Hits:5,949
swe htwe August 30, 2012 - 2:59 pm If they respect copyrights, they should be sued by themselves first. They should not copy foreign songs and story. They are also somekind of thieves.
Reply swe htwe August 30, 2012 - 11:51 pm Ps: They=myanmar actors
Reply ရာဇာ August 30, 2012 - 4:00 pm နိုင်ငံခြား ကားတွေ ဘာကြောင့်လူကြည့်များလဲ…ရှင်းရှင်းလေးပါ…ဗမာကား တွေထက် ပိုပြီးကြည့်ကောင်း လို့ပေါ့….အဆင့်အတန်း ရှိရှိ နဲ့ ဇတ်လမ်းကောင်းကောင်း ဗမာကား တွေရိုက်နိုင်ရင် အားပေးမဲ့ သူတွေ အများကြီးပါ….မခံချင်ရင် သူတို့လို ကောင်းအောင် ရိုက်ကြပေါ့….စီးပွါးရေး တခုထဲကြည့်ပြီး ရိုက်နေလို့ကတော့ အလားပေးတောင် အချိန်ကုန် ပါတယ်ဆိုပြီး မကြည့်ချင်တဲ့ သူတွေ အများကြီး ဆိုတာ သဘောပေါက်ကြပါ..
Reply Maung Maung August 30, 2012 - 4:06 pm ပြည်တွင်းခိုးကူးခွေ ကိုတော့ ဖမ်းလို့ရပေမဲ့ နယ်စပ်ဒေသအသီးသီးမှာရှိတဲ့ တဖက်နိုင်ငံ နယ်စပ်မြို့ ရှမ်းမြောက် မူဆယ်မှာဆိုရင် ကျယ်ဂေါင် ရွှေလီ စတဲ့ နယ်စပ်မြို့များအားလုံးမှာ နိုင်ငံခြားခိုးကူးခွေ ရှိသလို မြန်မာရုပ်ရှင် ကားများကိုလည်း ခိုးကူးပေးပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် မူဆယ်မြို့ကမြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များက လုပ်ကိုင်ကြပါတယ်။ သိန်းဂဏန်းထောင်ချီလုပ်ကိုင်ကြပါတယ်။အဲဒီလိုပဲ ထိုင်းနယ်စပ် အိန်ဒယိယနယ်စပ် တွေမှာလည်း လုပ်ကိုင်ကြတယ်လို့ပြောတယ်။ တရုတ်ပြည် က စီဒီခွေကလည်း ဈေးသက်သာလွန်းလို့ အလကားပေးသလား အောက်မေ့ရတယ်။အဲဒီလို စီဒီခွေလွတ်တွေနဲ့ကူးပြီး အသင့်ကူးပြီးခွေများကို သုံးခွေ တစ်ထောင် လေးခွေ တစ်ထောင် စသည်ဖြင့် ရောင်းပေးပါတယ်။ကူးလို့ရတဲ့ခွေ မှန်သမျှ ကူးပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ခွေ၊ ဂိမ်းခွေ ၊ ကွန်ပြူတာခွေ ၊ သီချင်းခွေ စသည်ဖြင့်အကုန်ကူးပါတယ်။ အဲဒါမျိုးတွေကို ဦးဇင်ဝိုင်း တို့ဘယ်လို့ဖမ်းမလည်း။ ကျနော်ကတော့ ညာဏမူပိုင်ခွင့် ကို သဘောကျသူပါ။ ခွေကောင်းခွေသန့် တရားဝင်ခွေ အောရယ်ဂျင်နယ်ခွေ ကို သင့်တင့်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ အားပေးကြည့်ချင်သူပါ။ တချို့က ကူးခွေက ၅၀၀ တည်းဆိုတော့ ကူးခွေကို ပဲ တခါတည်းဝယ်ကြည့်လိုက်တာပေါ့။ မူရင်းခွေဆိုရင် ဈေးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်လေ။ အဲဒါမျိုးကိုလည်း ဖြေရှင်းပေးပါဦး။ အများ လက်ခံ ၀ယ်ယူ ကြည့်ရှုနူိုင်တဲ့နှုန်းထားလေးဖြစ်အောင် လုပ်ပေးစေချင်တယ်။ ကူးခွေကိုလည်း ဖမ်းတယ်။ တရားဝင်ခွေကျတော့ ဈေးနုန်းက မိုးထိအောင်မြင့်တယ်။ အလွယ်ဝယ်လို့မရဘူးဆိုတော့ ကူးခွေက ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာပါ စုံစမ်းသင့်ပါတ ယ်လို့ အကြံပြုတင်ပြအပ်ပါတယ်။
Reply alfreadyoung August 30, 2012 - 6:50 pm ကိုရာဇာပြောသလိုပါပဲ မြန်မာဗီဒီယိုကားတွေရဲ့အဆင့်အတန်းကိုလည်းပြန်လည်စိစစ်ပေးပါအုံး
Reply moenagar August 30, 2012 - 11:42 pm ခိုးယူတာ၊ ခိုးကူးတာကိုဖမ်းဆီးတယ်ဆိုတာသဘာဝကျပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့လောက
Reply ရေဒီယိုကမာရွတ် August 31, 2012 - 3:03 am ကူးခွေရောင်းတဲ့သူတွေကလိုင်းကြေးပေးပြီးရောင်းနေကြတဲ့သူတွေပါ နောက်ပြီးမရှိဆင်းရဲ
Reply မြို့ နယ် မူပိုင်ရှင်တစ်ဦး September 2, 2012 - 3:55 am ရေဒီယိုကမာရွတ်ပြောတာကိုထောက်ခံပါတယ်။နယ်မှာတောင် မြန်မာခွေ ခိုးငှားတာဖမ်းရင် ရဲ ကို ဘယ်ရပ်ကွက်၊ဘယ်လမ်းက ဘယ်သူ လို့ တောင်မပြောရဲဘူး။ပြောလိုက်တာနဲ့ သတင်းသွားပေးတော့တာပဲ။တကယ်သွားဖမ်းရင် ဘာမှမမိတော့ဘူး။
Reply min min August 31, 2012 - 6:32 am ကလေးတွေတွေရဲ့ကာတွန်းကကားကောင်းကောင်းတွေဟာနီုင်ငံခြားကားတွေမှာပဲရှိတာပါအဲဒါလေးတွေတော့တရားဝင်ရောင်းနှိင်အောင်လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီနှိင်ငံဆိုပြီးသူများတွေ
Reply pwa pwa gyi August 31, 2012 - 8:29 am Of course original DVD is expensive and should consider millions of dollars have been invested to produce the movie or song ( Time, Money, Idea, Creativity etc;).
Reply Fighterman August 31, 2012 - 8:56 am ခိုးကူးခွေလို့ပြောပြီး သူ့တို့ထုတ်တဲ့ Master အခွေကရော Quality ဘယ်လောက်ကောင်းနေလို့လဲ။ ဈေးနှုန်းကမိုးထိခေါင်နေပြီး အခွေ Quality ကျတော့ ခိုးကူးခွေလောက်တောင် မကောင်းဘူး။ 100 တန် အခွေလွတ်နဲ့ကူးပြီး ပုံနှိပ်ရိုက်ထားတဲ့ စတေကာလေးကပ်လိုက်တာနဲ့ Master အခွေ လို့ဖြစ်သွားတာလား။ သူများနိုင်ငံတွေက Masterခွေ တွေကိုကြည့်လိုက်ပါ။ ဆီနဲ့ရေလို ကွာခြားလွန်းတယ်။ ရိုက်ကွက်၊ အသံပိုင်း၊ အခွေ အရည်အသွေး အားလုံးပေါ့ဗျ။ ဘာမှကိုမမှီတာ။ မှီတာတစ်ခုတော့ရှိတယ် အခွေဈေးပေါ့ဗျ။ကြည့်ရှုသူတွေ မကြည့်ရအောင် နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်တွေ၊ နိုင်ငံခြားသီချင်းတွေ ပိတ်ပင်ပြီး အခုလုပ်နေတဲ့ ထုတ်လုပ်သူတွေ အဆိုတော်တွေ ဒါရိုက်တာတွေရော ဒီနိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ကိုပဲ မှီးငြမ်း ခိုးချနေကြတာမဟုတ်လား တချို့ဟာတွေဆို ချွတ်စွတ်ကိုတူနေတာပဲ။ နောက်တစ်ခုက ဒီလို ပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အတွက် ပိတ်ပင်တဲ့နေရာမှာ ပြန်အစားထိုးမှုလုပ်မပေးနိုင်ပဲ ဒီလိုပဲဖမ်းဆီးနေရင်တော့ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖျော်ဖြေရေး ဆိုတာ မရှိတော့ပဲ ခံစားချက်ကင်းမဲ့တဲ့လူဘိန်း တွေပဲဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ် ဆိုတာကို မသိကြတာလား။ မြန်မာရုပ်ရှင်၊ မြန်မာ့ ဂီတက ဘာလဲ။ ဘယ်အချိန်ပဲကြည့်ကြည့် ပျဉ်းမငုတ်တို နဲ့မတက်လာဘူး။ မြန်မာ ဗီဒီယိုကား ဇာတ်လမ်းကြည့်လိုက်ပါ ဟာသကားနဲ့ကိုမတက်လာဘူး၊ ကြည့်လိုက်ရင်လည်း ဇာတ်လမ်း အစလေး ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ တကားလုံးကိုပြီးအောင်ကြည့်စရာမလိုဘူး။ ဇာတ်လမ်းတွေတော်တော်များများက ဆင်တူယိုးမှားတွေချည်းပဲ။ အခုရိုက်နေတဲ့ ဇာတ်လမ်း၊ MTV၊ သီချင်း ဒီဟာတွေကိုရော နိုင်ငံခြား ကနေခိုးချနေတာပဲမဟုတ်လား၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ခိုးချပြီး ကျန်တဲ့သူတွေကို ခိုးတယ်ဆိုပြီး ဖမ်းတာကဘာလဲ။ မြန်မာရုပ်ရှင်ကို ကြည့်လိုက်ရင် ဘာမှခေတ်မှီတာမတွေ့ရဘူး။ အိမ်ပုံစံလေးရိုက်ပြတောင် ဒီအိမ်တစ်ဆောင်က ဇာတ်ကား တော်တော်များများမှာကို တွေ့ရတယ်။ အနောက်တိုင်း ရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်လိုက်စမ်းပါ ခေတ်ရှေ့ပြေးနေတဲ့ ကားတွေလည်းအများကြီး။ ကျွန်တော်တို့ ခေတ်မှီပြီး အတွေးသစ် အမြင်သစ်တွေ ရလာတာလည်း ဒီ အနောက်တိုင်းရုပ်ရှင် တွေ က တဖက်တလမ်းက အထောက်အကူပြုထားတယ်။ အခုဗျ တရားခွေကိုတောင်ဖမ်းနေရင် သာသနာပြန့်ပွားရေးဆိုတာကို ပိတ်ပင်တာနဲ့ အတူတူပဲ။ ဆင်ဆာတင်တဲ့ တရားခွေကိုမှဝယ်ပြီး တရားနာရမယ်ဆိုရင် တစ်ခွေကို 1500 လောက်ရှိနေတဲ့တန်ဖိုးကို ဆင်းရဲသားလူတန်းစားတွေ တရားတော်တွေကို နာယူလို့ရနိုင်ဦးမလား။ အဲဒါတော့ တော်တော့ကိုရုပ်ဆိုးလွန်းတယ်။ ဘယ်အရာမဆို တစ်ခုခု ကို ပြောင်းလဲတော့မယ်ဆိုရင် ပြန်အစားထိုးဖို့အဆင်သင့်လုပ်ထားရတယ်။ စဉ်းစားကြစမ်းပါဗျ အခုလုပ်နေတဲ့လုပ်ရပ်တွေ လမ်းကြောင်းမှန်ကန်ရဲ့လားဆိုတာ ကိုသေချာစဉ်းစားစေချင်တယ်။ တာဝန်ရှိတဲ့ အထက်လူကြီးပိုင်းတွေလည်း ဒီဟာကို သေချာစီစစ်ပေးစေချင်ပါတယ်။
Reply kaung September 3, 2012 - 9:39 pm ကွန်မန့်လေးကောင်းလို့ထောက်ခံအားပေးလိုက်ရတာပါ။ မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာ အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားများဟာဗမာကားဆိုသိပ်ပြီးကြည့်တဲ့သူအလွန်ရှားသွားပါပြီ။နိုင်ငြိံခားကားကိုပဲအလေးထားပြီးကြည့်နေကြတာများပါတယ်။ဒါဟာဘာလဲဆိုတာရှင်းနေပါတယ်။မြန်မာပြည်သားတွေဆိုတာဟာလဲ အတွေးအခေါ်အဆင့်အတန်းတွေမနိမ့်ကျတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီတော့မြန်မာရုပ်ရှင်အစည်းအရုးံအနေနဲ့အတွေးအခေါ်မြင့်မားပြီးဘယ်နိုင်ငံကမှမှီငြမ်းကူးယူတာမျိုးမရှိပဲမြန်မာကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးပုံစံများနဲ့ဖေါ်ထုတ်ထားတဲ့အနုပညာများကိုပရိတ်သတ်ကိုချပြကြပါ။
Reply david August 31, 2012 - 10:44 am သွားလေသူဦးကျော်ဆန်းကိုနိုင်ငံခြားအခွေရောင်းသူတွေကကျေးဇူတင်နေကြတယ်။အခုတင်လိုက်တဲ့ခေါင်းဆိုသူက သာကူကြီးဆိုပါလာ အနှစ်၂၀ကျော်ကောင်းကောင်းငွေရှာပြီး သည်ဘက်ခေတ်မှာလည်းဆရာကြီးဝင်လုပ်နေတာတော့မမိုက်ဘူး။ သူကိုအပြင်လောကတော်တော့များများကမကြိုက်ကြဘူး ဒါကြောင့်အခွေရောင်းသူတွေရုပ်ရှင် အစည်းရုံးရှေမှာသွားပြီးဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ကြမယ်လိုသိရတယ် သူကိုလည်းဒီနေရာကနုတ်ထွက်ပေးဘို.တောင်းဆိုကြမယ်လိုသိရပါတယ်။
Reply အေးချမ်းဟန် August 31, 2012 - 11:37 am ရှင်းရှင်းပြောရရင် ဈေးလည်းသက်သာတယ်။ ကြည့်လို့ကောင်းတယ် ဒါကြောင့်
Reply thurain August 31, 2012 - 1:48 pm ရေဒီယိုကမာရွတ်ကြီးရေ ပြောနေတာရုပ်ရှင် နဲ့ အခွေလောကအကြောင်းနော်………
Reply သေမင်း August 31, 2012 - 2:49 pm ဖမ်း ဖမ်း ဆိုရင် ကော်ပီ သီချင်း ကော်ပီ ရုပ်ရှင် သမားတွေ အရင် ဖမ်း ရ မယ်
Reply Kyeemyidain Batok August 31, 2012 - 4:35 pm နယ်မှာက ခုတ်ရာတစ်ခြား ရှရာတစ်ခြားဖြစ်နေတယ်။ ဗမာခွေတွေကိုပေါ်တင်ရောင်း နိုင်ငံခြားခွေမရောင်းတဲ့။ ဒါဟာတို့ဗမာပြည်။
Replyုkyaw thu aung August 31, 2012 - 4:53 pm ဦးဇင်ဝိုင်းရေ..ကျွန်တော်က ပခုက္ကူမြို့မှာ မြန်မာကားဖြန့်ချီနေသူတစ်ဦးပါ မူပိုင်ခွင့်ကို မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေနဲ့ဘဲ ဖမ်းဆီးအရေးယူပါဗျာ မြန်မာကားတွေ ကြည့်တဲ့လူ အများကြီးရှိနေပါတယ် မင်းသားဈေး မင်းသမီးဈေး မာစတာကြေး ဘာဈေးညာဈေး အစစဈေးကြီးပီး ဇာတ်လမ်းတွေက ဖန်တရာတေနေအောင်ညံ့နေလို့ ဈေးကွက်ပျက်တာပါ ခင်ဗျားတို့ရန်ကုန်ကထွက်သမျှ မကွေးတိုင်းကမ၀ယ်တဲ့ကားရှိခဲ့လို့လား နောင်ကြရင်တော့ ရှိလာတော့မှာပါ၊ ကော်ပီခွေသုံးလို့ဆိုပီးလိုက်ဖမ်းနေတော့ ဆိုင်တွေကပြုတ်ကုန်ပြီလေ.. မူပိုင်ကြေးလည်း ပေးဝယ်ထားရသေးတယ် 200 ကျပ်တန်တဲ့ မာစတာကို 450 ကျပ်နဲ့လည်းရောင်းချင်နေသေးတယ် တစ်ချပ်ကို 250 ကျပ် အမြတ်နဲ့ တစ်ပြည်လုံးအတွက် အချပ်ရေ တစ်သိန်းလောက်ပဲထားပါ သိန်းပေါင်း 250 ရနေဘီ မူပိုင်ကြေးလည်း ရထားပီးသား လောဘတော်တော်ကြီးပီး တစ်ဘို့ထဲကြည့်တဲ့ ရန်ကုန်ကထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီသူများခင်ဗျား။ ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာ ကျွန်တော်က မြန်မာကားဖြန့်ချီရေးလုပ်တယ် မိသားစု ၆ ယောက်ရှိတာ ၄တန်းကျောင်းသားတစ်ယောက်ပဲ မြန်မာကားကြည့်တယ် ၊ကိုယ့်မျက်ချေးကို ကိုယ်မြင်အောင်ကြည့်ပါဗျာ။
Reply မြို့ နယ် မူပိုင်ရှင်တစ်ဦး September 2, 2012 - 3:50 am ကျွန်တော်က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အနောက်ပိုင်းက မြို့ နယ်တစ်ခုက မူပိုင်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးပါ။ကျွန်တော်တို့ မြို့ နယ်မှာ မြန်မာဇာတ်ကားခွေတွေကို ရန်ကုန်မှာ မနက်ထွက်ရင် နေ့ လည်ပိုင်းနဲ့ ည ပိုင်း ကျွန်တော်မြို့ ကို Express ကားသမားတွေကတဆင့် ခိုးငှားတဲ့သူတွေဆီကို တန်းရောက်ပါတယ်။ကော်ပီ မဟုတ်ပဲ မာစတာခွေတွေပါ။အချပ်ပိုတွေမတရားဝယ်ပြီးတဆင့်ပြန်လည်ရောင်းနေတဲ့ ရန်ကုန်အခွေအငှားဆိုင်တွေကိုလည်း ထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာထိထိရောက်ရောက်အရေးယူဆောင်ရွက်မှသာလျှင် နယ်ဖြန့် ချိရေးတွေကော၊အငှားဆိုင်တွေပါ အသက်ရှူချောင်ပါလိမ့်မယ်။နယ်မှာ တစ်စစီလိုက်ကောက်နေရမယ့် အစား ရန်ကုန်မှာ ပပျောက်အောင်နှိမ်နင်းမှသာ ရုပ်ရှင်နှင့် ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း အသက်ဆက်ရှင်နိုင်မှာပါ။အပေါ်ကနားမလည် ပါးမလည်ပြောနေတဲ့သူများ သူတို့ ကိုယ်တိုင်ဒီအလုပ်မလုပ်ဘူး မခံစားဘူးသေးလို့ ကိုယ်ချင်းမစာတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကိုယ့်ပစ္စည်း အခိုးခံရတာကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ရက်ရက်ရောရော ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ဘယ်သူတွေ လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကို အပေါ်ကအခွေဖမ်းဆီးခြင်းအပေါ် လျှောက်ပြောနေတဲ့ ဆရာကြီး၊ဆရာမကြီးများကို ကျွန်တော်က မေးလိုက်ချင်ပါတယ်။
Reply ကျော်ကျော်ဦး September 2, 2012 - 3:23 pm မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောက အရင်တိုးတက်အောင်လုပ်ရမှာပါ
Replyုkaainoo October 19, 2012 - 1:22 pm မြန်မာရုပ်ရှင်အခုကားတွေကိုတော့ အကြည့်ဖြစ်တာကြာပါပြီ.. ဗီဒီယိုဆိုရင် ငှားတောင်မကြည့်ဘူး တီဗီကလာမှ တခါတခါကြည့်မိတယ်… ဇတ်အိမ်ကလဲ မခိုင်.. ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကို ကြိုသိနေလို့ဘဲ
Reply thant October 20, 2012 - 1:03 am ကိုယ့်ခွေကို ခိုးကူးတာမကြိုက်ရင် သူများတွေဆီက (အနောက်နဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေ) အနုပညာတွေကိုလည်း မခိုးနဲ့.. ဒါမှ တရားမျှတမယ်.. ဒါမှ ကိုယ့်ခွေကို အားပေးမယ်… ဒေါင်းကသလို မလုပ်ပါနဲ့.. ရှေ့က လှတယ်ဆိုလို့ မြောက်ကားကြီးလုပ်နေ နောက်က ဖင်ပေါ်နေပြီ…